2 Samueri 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 17:1-29
17 Zvino Ahitoferi akati kuna Absaromu: “Ndapota, rega ndisarudze varume zviuru gumi nezviviri, ndisimuke, nditevere Dhavhidhi usiku huno.+ 2 Ndichamusvikira paanenge aneta uye asina simba mumaoko ose,+ ndichamudederesa; uye vanhu vose vaainavo vachatiza, uye ndichauraya mambo ari oga.+ 3 Rega ndidzose vanhu vose kwauri. Kudzoka kwevanhu vose kunotsamira pane zvichaitika kumurume wauri kutsvaka; uye vanhu vose vachava norugare.” 4 Shoko racho rakanga rakanaka kuna Absaromu+ nokuvarume vakuru vose vaIsraeri. 5 Asi Absaromu akati: “Ndapota, shevedzaiwo Hushai+ muAki, tinzwewo kuti iye anoti chii.” 6 Naizvozvo Hushai akapinda maiva naAbsaromu. Absaromu akabva ati kwaari: “Izvi ndizvo zvataurwa naAhitoferi. Tiite zvaataura here? Kana zvisingaiti, iwe taura.” 7 Hushai akati kuna Absaromu: “Zano rataurwa naAhitoferi harina kunaka panguva ino!”+ 8 Hushai akatizve: “Iwe unonyatsoziva baba vako nevarume vavo, kuti vane simba,+ uye kuti vane mweya une shungu,+ semhuka hadzi inonzi bheya yarasa vana vayo musango;+ baba vako murwi,+ uye havazorari panorara vanhu vacho. 9 Tarira! Iye zvino ivo vakavanda+ mune rimwe remakomba kana kuti mune imwe yenzvimbo dzacho; uye paanongotanga kuvarwisa, anonzwa nezvazvo achabva anzwa oti, ‘Vanhu vari kutevera Absaromu vakundwa!’ 10 Kunyange murume akashinga ane mwoyo wakaita somwoyo weshumba+ chokwadi achati rukutu;+ nokuti vaIsraeri vose vanoziva kuti baba vako murume ane simba+ uyewo, ndozvakaita varume vakashinga vavainavo.+ 11 Ini ndinopa zano rokuti: VaIsraeri vose ngavaungane kwauri, kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha,+ vakawanda sejecha riri pedyo negungwa,+ newewo uende kunorwa.+ 12 Naizvozvo tichasvika pavari pane imwe yenzvimbo dzacho pavanenge vari,+ isu tichavasvikira sedova+ rinowira pasi; uye hapana kana munhu mumwe chete pakati pavo nevarume vose vavainavo achasara. 13 Kana vakapinda mune rimwe guta, vaIsraeri vose vachaenda netambo kuguta iroro, torikwevera kumupata une rukova, kusvikira pasisina kunyange dombo duku rinosara.”+ 14 Absaromu nevarume vose vaIsraeri vakabva vati: “Zano raHushai muAki riri nani+ kupinda zano raAhitoferi!” Zvino Jehovha akanga arayira+ kuti zano raAhitoferi rikoneswe+ kunyange zvazvo rakanga rakanaka,+ kuti Jehovha aunzire Absaromu dambudziko.+ 15 Gare gare Hushai akati kuvapristi, Zadhoki+ naAbhiyatari: “Ahitoferi apa Absaromu nevarume vakuru vaIsraeri zano rokuti nerokuti; ini ndikapa zano rokuti nerokuti. 16 Zvino kurumidzai kutumira shoko muudze Dhavhidhi,+ muchiti, ‘Musarara mumapani akaita gwenga omurenje usiku huno, asi chokwadi munofanira kuyambuka,+ kuti mambo nevanhu vose vaainavo varege kuparadzwa.’”+ 17 Jonatani+ naAhimaazi+ zvavakanga vakamira paEni-rogeri,+ mumwe mushandikadzi akaenda, akanovaudza. Naizvozvo vakaenda, zvavaifanira kunoudza Mambo Dhavhidhi; nokuti vaisagona kupinda muguta vachionekwa. 18 Zvisinei, rimwe jaya rakavaona rikaudza Absaromu. Naizvozvo vaviri vacho vakakurumidza kuenda, vakasvika kuimba yomumwe murume kuBhahurimu,+ akanga aine tsime pachivanze chake; uye vakapinda mariri. 19 Pashure paizvozvo mukadzi wacho akatora chinhu chokuvharisa, akachiwaridza pamusoro pomuromo wetsime racho, akaunganidza zviyo zvakabanzurwa pariri;+ uye hapana chinhu chakazivikanwa nezvaro. 20 Zvino vashandi vaAbsaromu vakasvika kumukadzi wacho pamba pake, vakati: “Ahimaazi naJonatani vari kupi?” Mukadzi wacho akati kwavari: “Vapfuura nepano vachienda kumvura.”+ Vakabva varamba vachitsvaka, asi havana kuvawana,+ naizvozvo vakadzokera kuJerusarema. 21 Zvino pashure pokunge vaenda, ivo vakabva vabuda mutsime racho, vakapfuurira, vakanoudza Mambo Dhavhidhi, vakati kuna Dhavhidhi: “Simukai, mukurumidze kuyambuka mvura; nokuti Ahitoferi apa zano+ seizvi pamusoro penyu.” 22 Dhavhidhi akabva asimuka nevanhu vose vaaiva navo, vakaramba vachiyambuka Jodhani kusvikira mangwanani kwachena,+ kusvikira pasisina kana mumwe chete akanga asina kuyambuka Jodhani. 23 Zvino Ahitoferi akaona kuti zano rake rakanga risina kuitwa,+ akasungirira chigaro pambongoro, akasimuka, akaenda kumba kwake kuguta rake.+ Akabva arayira imba yake,+ akazvisungirira,+ akafa.+ Naizvozvo akavigwa+ munzvimbo yemakuva yemadzitateguru ake. 24 Asi Dhavhidhi akasvika kuMahanaimu,+ Absaromu akayambuka Jodhani, iye nevarume vose vaIsraeri vaaiva navo. 25 Amasa+ ndiye akaiswa naAbsaromu panzvimbo yaJoabhi+ kuti atarisire uto; Amasa aiva mwanakomana womurume ainzi Itra+ muIsraeri, akarara naAbhigairi+ mwanasikana waNahashi, munun’una waZeruya, amai vaJoabhi. 26 VaIsraeri naAbsaromu vakadzika musasa munyika yeGiriyedhi.+ 27 Dhavhidhi paakangosvika kuMahanaimu, Shobhi mwanakomana waNahashi wokuRabha+ wevanakomana vaAmoni,+ naMakiri+ mwanakomana waAmieri+ wokuRo-dhebhari, naBhazirai+ muGiriyedhi wokuRogerimu+ 28 vakauya nemibhedha nemabheseni nemidziyo yomuumbi, negorosi nebhari nefurawa+ nezviyo zvakakangwa+ nebhinzi hombe+ nenyemba+ nezviyo zvakaomeswa; 29 nouchi+ noruomba+ nemakwai nomukaka wemombe wakakora, vakaunzira Dhavhidhi nevanhu vaakanga ainavo kuti vadye,+ nokuti vakati: “Vanhu vava nenzara, vaneta, uye vava nenyota murenje.”+